အချစ်၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်း (အပိုင်း - ၂) - For her Myanmar
တကယ်တမ်း ယမုံပြော၍သာ ဆရာဝန်ဟူ၍ ယုံရသည်၊ ကပိုကယို၊ ရှုပ်ပွပွဖြစ်နေသော ထိုလူသား၏ မျက်မှန်အောက်ကနေ လူကိုပြူးပြဲကြည့်နေပုံကိုကစ ကြောင်တောင်တောင် နိုင်လှသည်။
ဟန်နီသည် လက်ဝါးအချင်းချင်းပွတ်ရင်း အိပ်ယာထက်မှာ ဝုန်းခနဲ ထထိုင်လိုက်မိသည်။ လက်ဝါးနှစ်ဖက်နှင့် လက်တစ်လျှောက် နီရဲသော အကွက်များ အစက်များ ထကာ စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်းနှင့် ယားနေသည်။ အလာဂျီ ထပြီ။ ညက ကိုယ်ထဲ အနည်းငယ်သာဝင်ခဲ့သော အယ်လ်ကိုဟောပမာဏနည်းနည်းက များများပညာပြနေချေပြီ။ အိပ်ရာဘေးက စားပွဲတင်နာရီကို လှမ်းယူ ကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၃ နာရီသာရှိသေးသည်။ မိုးမလင်းသေးချိန်မို့ ဆေးခန်းသွားဖို့ကလည်း အဆင်မပြေလောက်သေး။
ဟန်နီတက္ကသိုလ်တက်သည့် အချိန်၊ ယမုံတို့ အိမ်တွင် ပါတီလုပ်ရင်း ဝိုင်သောက်ကတည်းက ဟန်နီ့မှာ အလာဂျီ ထပြီး အယ်လ်ကိုဟောနှင့် မတည့်မှန်း သိခဲ့ရသည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ အယ်လ်ကိုဟောနှင့် ပတ်သက်သမျှကို ရှောင်ခဲ့တာ မနေ့ ညအစောပိုင်းအထိပင်။ ဧကသု ယူလာပေးသော အအေးခွက်ထဲတွင် အယ်လ်ကိုဟောပါမှန်းမသိဘဲ သောက်မိ ကတည်းက အလာဂျီထတော့မည်မှန်း သိခဲ့သော်ငြား ချက်ချင်းမဖြစ်ဘဲ မနက်စောစောမှ ထဖြစ်တာကြောင့် ဆေးဝယ်ရန် လည်း အခက်။ ဆေးခန်းသွားရန်လည်း အခက် ဖြစ်နေသည်။
ဟန်နီ မှန်တင်ခုံရှေ့ကိုပြေးသွားပြီး မျက်နှာ လည်ပင်းနှင့် ကျောပြင်ဘက်ကို လှည့်ကြည့်လိုက်သည်။ ကံကောင်းစွာနှင့် ထိုနေရာများတွင်တော့ ဘာမှရှိမနေ။ လက်နှစ်ဖက်တွင်သာ နီရဲနေသည်။ ဒီပုံအတိုင်းဆို မနက်ရှုတင်တောင် ဖျက်ပစ်ရကိန်း ဆိုက်နေပြီ မဟုတ်ပါလား…
စားပွဲပေါ်မှ ဖုန်းကိုကောက်ယူကာ ယမုံ့ဆီသို့ဖုန်းခေါ်လိုက်သည်။ မနက် ၃ နာရီမို့ အားနာပေမဲ့ အားကိုးတိုင်ပင်စရာက ယမုံသာ ရှိသည်။ မေမေ့ကိုနှိုးပြီးပြောရင်လည်း နောက်ဆုံးတွင် “ယမုံ့ကို ဖုန်းဆက်” ဆိုသည့် စကားသာ ထွက်လာလိမ့်မည်မှန်း သေချာနေသည်။
“ဟဲလို ယမုံ… ငါအလာဂျီထနေတယ်”
“အလာဂျီလေ အယ်လ်ကိုဟောအလာဂျီ ထနေတယ်လို့ လက်နှစ်ဖက်လုံးနီရဲပြီး စပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ယားကျိကျိနဲ့”
“ဟဲ့ ဟန်နီ နင် အယ်လ်ကိုဟောအလာဂျီရှိမှန်းသိလို့ ရှောင်ခဲ့တာ ကြာပြီမဟုတ်လား ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဒီအချိန်ကြီး ထဖြစ်ရတာလဲ”
“အဲဒါက နောက်မှပြောမယ်ဟာ အခု ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ”
“ဆေးခန်းသွားရမှာပေါ့ ဆေးလေးဘာလေး လိမ်းမှ အဆင်ပြေမှာ”
“ဒီအချိန်ကြီး ဘယ်ဆေးခန်းရှိမှာလဲ… ဆေးရုံပဲသွားရမလား”
“ငါတို့လမ်းထဲမှာ ဆေးခန်းတစ်ခုတော့ရှိတယ် ဆရာဝန်က သူ့အိမ်မှာပဲ ဖွင့်ထားတာ အဲဒီကိုသွားကြည့်မလား ငါလာခေါ်မယ်လေ”
နှစ်လမ်းကျော်မှာနေတဲ့ ယမုံက ခဏလေးနှင့် ရောက်လာမည်မို့ ဟန်နီက မေမေ့ကိုနှိုး၍ အကျိုးအကြောင်း ပြောပြကာ အိမ်ရှေ့ထွက်စောင့်နေလိုက်သည်။ ယမုံ့ကားရောက်လာသည်နှင့် ကားပေါ်တက်ပြီး ယမုံက ဆေးခန်းကို အမြန် မောင်းတော့သည်။ ၆ ထပ်တိုက် ရှေ့မှာ ကားကိုရပ်လိုက်ပြီး လူခေါ်ဘဲလ်ကို နှိပ်လိုက်သည်။
၅ မိနစ်လောက်ကြာမှ မြေညီထပ်ကနေ ဆံပင်စုတ်ဖွား အဝတ်အစား ကပိုကယိုနှင့် လူတစ်ယောက်ထွက်လာသည်။ လက်ထဲမှ ကိုင်းအနက်နှင့် မျက်မှန်လေးထောင့်ကို တပ်ရင်း ဟန်နီနှင့် ယမုံ့ကို ပြူးပြဲပြီး ကြည့်နေသည်။
“ဘယ်သူတွေလဲဗျ… ဒီအချိန်ကြီး ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ”
“အရေးကြီးလို့ပါ ဒေါက်တာ ကျွန်မသူငယ်ချင်း အလာဂျီထလို့ပါ”
“သြော် လာ လာ အထဲဝင်”
ထိုလူက သံပန်းတံခါးကို ဖွင့်ပေးကာ ရှေ့ကနေ၀င်သွားသည်။ ဟန်နီက ယမုံနောက်ကလိုက်ဝင်ရင်း “သူက ဆရာဝန် လား” ဟုခပ်တိုးတိုးမေးခြင်းကို ယမုံက မျက်လုံးပြူးရင်း ခေါင်းညိတ်ပြရင်းဖြင့် ဖြေလေသည်။ တကယ်တမ်း ယမုံပြော၍သာ ဆရာဝန်ဟူ၍ ယုံရသည်၊ ကပိုကယို၊ ရှုပ်ပွပွဖြစ်နေသော ထိုလူသား၏ မျက်မှန်အောက်ကနေ လူကိုပြူးပြဲကြည့်နေပုံကိုကစ ကြောင်တောင်တောင် နိုင်လှသည်။
ထိုလူက တိုက်ခန်းရှေ့ခြမ်းက သီးသန့်ဖွဲ့ထားသော အခန်းလေးထဲဝင်ကာ မီးဖွင့်လိုက်သည်။ ဆေးခန်းအတွက် သီးသန့်ဖွဲ့ထားသော အခန်းလေးထဲက လေးပေမီးချောင်းလေး လင်းသွားသည်။ မီးလင်းသွားမှ နံရံတွင်ကပ်ထားသော ဒေါက်တာဇွဲသစ် ဆိုသော ဆိုင်းဘုတ်အပြာလေးကိုတွေ့လိုက်သည်။
“ထိုင်ပါ ညီမ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ”
ဒေါက်တာဇွဲသစ်က ဟန်နီ့လက်နှစ်ဖက်ကို ဆွဲကြည့်ရင်း
“အယ်လ်ကိုဟော အလာဂျီမှန်းသိတယ်ဆိုတော့ အရင်ကတည်းက ဖြစ်ဖူးတယ်ပေါ့ ဟုတ်လား ?? ဒါနဲ့များ ဘာလို့များ ထပ်သောက်တာလဲဗျာ ဒီလောက်ခံရခက်တာကို”
“သိရဲ့သားနဲ့တော့ သောက်မလားရှင်… သူငယ်ချင်းက ယူလာပေးတာကို မတော်တဆ သောက်လိုက်မိတာ”
ဟန်နီက မျက်စောင်းထိုးရင်း ဘုဆတ်ဆတ် ပြန်ပြောလိုက်သည်။ ဒီလောက် ခံရဆိုးတဲ့ ဝေဒနာကို မည်သူက မတည့်မှန်း သိလျက်နှင့် သောက်နေမည်နည်း!! ဟန်နီ့ပုံကိုကြည့်ကာ သူက ပြုံးလိုက်ရင်း…
“ပမာဏတော့ နည်းတဲ့ပုံပါပဲ… လက်မှာ ဖြစ်တာဆိုတော့”
“အင်း အဲဒါ ကံကောင်းသွားတယ်.. ကဲ လိမ်းဆေးပဲ ပေးလိုက်မယ် ပွတ်မလိမ်းနဲ့ ဖွဖွလေးလိမ်းပေးနော်”
ဟန်နီက ခေါင်းညိတ်လိုက်စဉ် ယမုံက ဝင်ပြောသည်။
“မနက်ဖြန်တော့ ပျောက်မှာပါနော် ဒေါက်တာ”
“မနက်ဖြန်တော့ အလုပ်ခွင့်ယူလိုက်ရင် ပိုကောင်းမှာပါ… အိမ်မှာပဲ သက်တောင့်သက်သာ နားစေချင်တယ် ဘာအလုပ် လုပ်သလဲ”
ထိုမေးခွန်းကို မေးလိုက်သောကြောင့် ဟန်နီသူ့ကို ဖျတ်ခနဲကြည့်လိုက်မိသည်။ ဟန်နီသည် လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်နေတာမျိုး မဟုတ်သေးသော်လည်း ကြော်ငြာ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ မကြာခဏ ပါနေသူဖြစ်သည်။ သူသိလျက်နဲ့ တမင်များ မေးနေလားဟု အကဲခတ်သော်လည်း သူ့မျက်နှာကပုံမှန်ပင်။
ဟန်နီက မဖြေသောကြောင့် ယမုံကပဲ ဝင်ဖြေသည်။
“သြော်… ဒါဆိုလည်း ရှုတင်တစ်ရက်လောက်တော့နားလိုက်ပါ။ မိတ်ကပ်တွေဘာတွေ လိမ်းရင် ပိုဆိုးမှာ… ကဲ ဆေးမှတ်တမ်းလေးယူရအောင် နာမည်က…”
Related Article >>> သစ်ခက်လေးရဲ့ကောင်းကင်ပြာ
ဆေးခန်းထဲကထွက်လာတော့ အလင်းရောင် အနည်းငယ် မြင်နေရပြီဖြစ်၍ တိုက်ခန်းရှေ့က “ဇွဲ ဆေးကုခန်း” ဆိုသော ဆိုင်းဘုတ်ကို မြင်လိုက်ရသည်။ ဝေလီဝေလင်းမှာ ဆေးထကုပေးတာ အားနာစရာ ကျေးဇူးတင်စရာပေမဲ့ ဟန်နီ ကတော့ သိပ်မကျေနပ်ချင်။ လူကိုဆရာကြီးလုပ်တာရော ဟန်နီ့ကို သိတောင်သိပုံမပေါ်တာရောကို မကျေနပ်။
“ဟဲ့ ဟန်နီ မျက်နှာကလည်း စူပုပ်လို့ ဘာဖြစ်နေတာလဲ”
“ဟိုလူပေါ့.. ငါ့ကို သိတောင်မသိဘူး”
“ဒေါက်တာကိုပြောတာလား… သူက တီဗီမကြည့်လို့နေမှာပေါ့ဟာ”
“ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာ မော်ဒယ်လ်လို့ပြောတာတောင် နည်းနည်းမှအံ့သြပုံမပြဘူး ဘယ်လိုလူလဲမသိဘူး… ကြောင်တောင်တောင် ယိုတိယိုရွဲနဲ့… ဆရာကလည်းလုပ်သေးတယ်”
“အေး အဲ့ဒီကြောင်တောင်တောင်နဲ့ လူကပဲ မနက် ၃ နာရီခွဲကြီး နင့်ကို ဆေးထကုပေးတာ မဟုတ်ဘူးလား”
“ဟုတ်ပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်လည်း ဘာမှမပြောဘဲ သည်းခံနေတာ”
“အမလေး ဟန်နီရယ် မဟုတ်တာကို ကောက်ချင်နေပြန်ပြီ ကဲ ဒီနေ့တော့ အိမ်မှာနားလိုက် ဒီနေ့က ဓာတ်ပုံရှုတင်ပဲ ရှိတာမို့လို့ တော်သေးတယ် နောက်ဆို အစားအသောက် အနေအထိုင် ဆင်ခြင် ကြားလား… နောက်တစ်ပတ်လည်း အချိန်တွေက အပြည့်နော် နောက်လဆိုရင် ဇာတ်လမ်းစရိုက်တော့မှာ”
“အခု အလာဂျီက ဧကသုလက်ချက် မဟုတ်လား”
“သူကတမင်လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဟ မသိလို့ယူလာပေးတာ ငါလည်း မသိလို့ သောက်လိုက်တာ”
“အင်း အခုကတည်းက ကာပြောနေတယ် မိန်းမနော် အချိုးတွေပြောင်းနေပြီ”
ယမုံပြောတာကို ဟန်နီကဘာမှပြန်မပြောဘဲ ရယ်သာရယ်နေလိုက်သည်။ အိမ်ရောက်တော့ မေမေက ဟန်နီ့ ကို ဆေးလိမ်းပေးပြီးနောက် ဟန်နီလည်း အိပ်ရာထဲပြန်ဝင်ကာ ခွေနေလိုက်သည်။ အတွေးထဲတွင် စိုးမိုးလာသော ဧကသု ၏ အပြုံးချိုချိုလေးများက ဒေါက်တာဇွဲသစ်ကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရသော ဒေါသတွေကို လွှမ်းမိုးကာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ချိုမြလာသလိုပင်..
ကော်ဖီပူပူတစ်ခွက်ကို အရသာခံသောက်ရင်း မနက်ခင်းနေထွက်လာသည်ကို ကြည့်ရသည့် ခံစားချက်ကို ဧကသု အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ မှန်ရှေ့တွင် ကာထားသော လိုက်ကာရှည်နှစ်စကို ဆွဲပြီး ဘေးကပ်ပစ်လိုက်သည်။ ရန်ကုန်မြို့၏ မနက် ၄ နာရီခွဲအချိန်သည် အနည်းငယ် အေးချမ်းနေသည်ဟု ထင်ရသည်။ မကြာမီအချိန်တွင် ကားများ လူများ ဖြင့် လမ်းမများပေါ်တွင် ပြည့်နှက်လာတော့မည်။ ကွန်ဒို ၁၀ ထပ်မြောက်မှ လှမ်းမြင်ရသောကောင်းကင်သည် တိမ်လွှာများ အုပ်ဆိုင်းကာ ထူထူထဲထဲရှိလှသည်။ နေမင်းမှဖြာထွက်သော လိမ္မော်ရောင်အလင်းတန်းများကလည်း တိမ်စိုင်များကြားမှ ထိုးဖောက်ယိုစီးလျက်ရှိသည်။
ဧက ကော်ဖီခွက်ကိုကိုင်ရင်း မှန်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ချထားသော ဆိုဖာခုံပေါ်ထိုင်ချလိုက်သည်။ နံရံကပ်ဘီရိုပေါ်တင် ထားသော အမွှေးရည်ဖြန်းစက်ကလေးမှ အငွေ့ဖွားလေးများထွက်လာကာ လာဗင်ဒါရနံ့များ သင်းပျံ့လာတော့သည်။ နှာသီးဝ သို့ တိုးဝှေ့လာသော လာဗင်ဒါရနံ့ကို ရတော့မှ ညက တွေ့ခဲ့ရသော ခရမ်းနုရောင်မိန်းကလေးကို သတိရမိသည်။ ဟန်နီမေ… ခရမ်းရောင်လေးဝတ်ထားတော့ လာဗင်ဒါပန်းလေးနှင့်တောင် တူသလိုလိုပင်။
ဧက မိန်းကလေးအများကြီးနှင့် တွေ့ဖူးသည်။ ခဏတာ ခင်မင်ဖူးသည်။ သို့သော် တစ်ယောက်ကိုမှ ဟန်နီမေ ကဲ့သို့ စိတ်ထဲစွဲစွဲထင်ထင် မရှိလှ။ ဧကသုက ကျော်ကြားသည်။ လူအများစုက သူ့ကျော်ကြားမှုကြောင့်သာ သူ့ကို ခင်မင်ရင်းနှီးလို ကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူ့တွင်မိတ်ဆွေအစစ်တော့ တော်တော်ရှားသည်။ အနုပညာလောကတွင်းမှ မောင်နှမလို ခင်မင်ရသူ အချို့နှင့် ကျောင်းကတည်းက ခင်ခဲ့သည့် သူငယ်ချင်းအချို့လောက်သာ သူ့အတွက် အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးများနှင့် ပတ်သက်လာလျှင်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင်။ အောင်မြင်လိုသော တက်သစ်စကလေးများက သူ့ကိုကပ်သည်။ ပိုက်ဆံရှိ အသိုင်းအဝိုင်းကြီးကြီးက မိန်းကလေးများက သူ့ကိုကပ်သည်။ သို့သော် အတုအယောင်များပင်။ ထို့ကြောင့် ဧကဘေးတွင် မိန်းကလေးများ ဝိုင်းနေသော်လည်း ဧက နှလုံးသားကိုတော့ မည်သူကမှ ကိုင်မလှုပ်နိုင်သေး။
ဟန်နီမေကို တွေ့ဖူးသော်လည်း တကယ်တမ်း စကားပြောဖူးပြီးမှ စိတ်ဝင်စားမိလာသည်မို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပင် အံ့သြရသည်။ ညက သူပေးလိုက်သည့် ဝိုင်တစ်ခွက်ကြောင့် အလာဂျီများ ထနေသေးလားလို့ စိတ်ထဲထင့်သွားသည်။ ဖုန်းဆက်မေးရအောင်လည်း ဖုန်းနံပါတ်က မသိ။ ဖေ့စ်ဘုတ်တွင်လည်း သူငယ်ချင်းမဟုတ်။ ဒီထက်ပိုဆိုးသည်က သူ့ဘက်က တမင်တကာ လိုက်ရောနေသည်ဟု အထင်ခံရမှာကိုလည်း ကြောက်ရသေးသည် မဟုတ်ပါလား။ ထို့ကြောင့် ဒီမနက်တော့ တဖြည်းဖြည်းချင်းထွက် လာသည့်နေမင်းကို အရသာမခံနိုင်ဘဲ စိတ်မသက်မသာဖြင့်သာ ထိုင်ကြည့်နေမိတော့သည်။
တကယျတမျး ယမုံပွော၍သာ ဆရာဝနျဟူ၍ ယုံရသညျ၊ ကပိုကယို၊ ရှုပျပှပှဖွဈနသေော ထိုလူသား၏ မကျြမှနျအောကျကနေ လူကိုပွူးပွဲကွညျ့နပေုံကိုကစ ကွောငျတောငျတောငျ နိုငျလှသညျ။
ဟနျနီသညျ လကျဝါးအခငျြးခငျြးပှတျရငျး အိပျယာထကျမှာ ဝုနျးခနဲ ထထိုငျလိုကျမိသညျ။ လကျဝါးနှဈဖကျနှငျ့ လကျတဈလြှောကျ နီရဲသော အကှကျမြား အစကျမြား ထကာ စပျဖဉျြးဖဉျြးနှငျ့ ယားနသေညျ။ အလာဂြီ ထပွီ။ ညက ကိုယျထဲ အနညျးငယျသာဝငျခဲ့သော အယျလျကိုဟောပမာဏနညျးနညျးက မြားမြားပညာပွနခေပြွေီ။ အိပျရာဘေးက စားပှဲတငျနာရီကို လှမျးယူ ကွညျ့လိုကျတော့ မနကျ ၃ နာရီသာရှိသေးသညျ။ မိုးမလငျးသေးခြိနျမို့ ဆေးခနျးသှားဖို့ကလညျး အဆငျမပွလေောကျသေး။
ဟနျနီတက်ကသိုလျတကျသညျ့ အခြိနျ၊ ယမုံတို့ အိမျတှငျ ပါတီလုပျရငျး ဝိုငျသောကျကတညျးက ဟနျနီ့မှာ အလာဂြီ ထပွီး အယျလျကိုဟောနှငျ့ မတညျ့မှနျး သိခဲ့ရသညျ။ ထိုအခြိနျမှ စ၍ အယျလျကိုဟောနှငျ့ ပတျသကျသမြှကို ရှောငျခဲ့တာ မနေ့ ညအစောပိုငျးအထိပငျ။ ဧကသု ယူလာပေးသော အအေးခှကျထဲတှငျ အယျလျကိုဟောပါမှနျးမသိဘဲ သောကျမိ ကတညျးက အလာဂြီထတော့မညျမှနျး သိခဲ့သျောငွား ခကျြခငျြးမဖွဈဘဲ မနကျစောစောမှ ထဖွဈတာကွောငျ့ ဆေးဝယျရနျ လညျး အခကျ။ ဆေးခနျးသှားရနျလညျး အခကျ ဖွဈနသေညျ။
ဟနျနီ မှနျတငျခုံရှကေို့ပွေးသှားပွီး မကျြနှာ လညျပငျးနှငျ့ ကြောပွငျဘကျကို လှညျ့ကွညျ့လိုကျသညျ။ ကံကောငျးစှာနှငျ့ ထိုနရောမြားတှငျတော့ ဘာမှရှိမနေ။ လကျနှဈဖကျတှငျသာ နီရဲနသေညျ။ ဒီပုံအတိုငျးဆို မနကျရှုတငျတောငျ ဖကျြပဈရကိနျး ဆိုကျနပွေီ မဟုတျပါလား…
စားပှဲပျေါမှ ဖုနျးကိုကောကျယူကာ ယမုံ့ဆီသို့ဖုနျးချေါလိုကျသညျ။ မနကျ ၃ နာရီမို့ အားနာပမေဲ့ အားကိုးတိုငျပငျစရာက ယမုံသာ ရှိသညျ။ မမေကေို့နှိုးပွီးပွောရငျလညျး နောကျဆုံးတှငျ “ယမုံ့ကို ဖုနျးဆကျ” ဆိုသညျ့ စကားသာ ထှကျလာလိမျ့မညျမှနျး သခြောနသေညျ။
“ဟဲလို ယမုံ… ငါအလာဂြီထနတေယျ”
“အလာဂြီလေ အယျလျကိုဟောအလာဂြီ ထနတေယျလို့ လကျနှဈဖကျလုံးနီရဲပွီး စပျဖဉျြးဖဉျြး ယားကြိကြိနဲ့”
“ဟဲ့ ဟနျနီ နငျ အယျလျကိုဟောအလာဂြီရှိမှနျးသိလို့ ရှောငျခဲ့တာ ကွာပွီမဟုတျလား ဘယျလိုဖွဈလို့ ဒီအခြိနျကွီး ထဖွဈရတာလဲ”
“အဲဒါက နောကျမှပွောမယျဟာ အခု ငါဘယျလိုလုပျရမလဲ”
“ဆေးခနျးသှားရမှာပေါ့ ဆေးလေးဘာလေး လိမျးမှ အဆငျပွမှော”
“ဒီအခြိနျကွီး ဘယျဆေးခနျးရှိမှာလဲ… ဆေးရုံပဲသှားရမလား”
“ငါတို့လမျးထဲမှာ ဆေးခနျးတဈခုတော့ရှိတယျ ဆရာဝနျက သူ့အိမျမှာပဲ ဖှငျ့ထားတာ အဲဒီကိုသှားကွညျ့မလား ငါလာချေါမယျလေ”
နှဈလမျးကြျောမှာနတေဲ့ ယမုံက ခဏလေးနှငျ့ ရောကျလာမညျမို့ ဟနျနီက မမေကေို့နှိုး၍ အကြိုးအကွောငျး ပွောပွကာ အိမျရှထှေ့ကျစောငျ့နလေိုကျသညျ။ ယမုံ့ကားရောကျလာသညျနှငျ့ ကားပျေါတကျပွီး ယမုံက ဆေးခနျးကို အမွနျ မောငျးတော့သညျ။ ၆ ထပျတိုကျ ရှမှေ့ာ ကားကိုရပျလိုကျပွီး လူချေါဘဲလျကို နှိပျလိုကျသညျ။
၅ မိနဈလောကျကွာမှ မွညေီထပျကနေ ဆံပငျစုတျဖှား အဝတျအစား ကပိုကယိုနှငျ့ လူတဈယောကျထှကျလာသညျ။ လကျထဲမှ ကိုငျးအနကျနှငျ့ မကျြမှနျလေးထောငျ့ကို တပျရငျး ဟနျနီနှငျ့ ယမုံ့ကို ပွူးပွဲပွီး ကွညျ့နသေညျ။
“ဘယျသူတှလေဲဗြ… ဒီအခြိနျကွီး ဘာကိစ်စရှိလို့လဲ”
“အရေးကွီးလို့ပါ ဒေါကျတာ ကြှနျမသူငယျခငျြး အလာဂြီထလို့ပါ”
“သွျော လာ လာ အထဲဝငျ”
ထိုလူက သံပနျးတံခါးကို ဖှငျ့ပေးကာ ရှကေ့နဝေငျသှားသညျ။ ဟနျနီက ယမုံနောကျကလိုကျဝငျရငျး “သူက ဆရာဝနျ လား” ဟုခပျတိုးတိုးမေးခွငျးကို ယမုံက မကျြလုံးပွူးရငျး ခေါငျးညိတျပွရငျးဖွငျ့ ဖွလေသေညျ။ တကယျတမျး ယမုံပွော၍သာ ဆရာဝနျဟူ၍ ယုံရသညျ၊ ကပိုကယို၊ ရှုပျပှပှဖွဈနသေော ထိုလူသား၏ မကျြမှနျအောကျကနေ လူကိုပွူးပွဲကွညျ့နပေုံကိုကစ ကွောငျတောငျတောငျ နိုငျလှသညျ။
ထိုလူက တိုကျခနျးရှခွေ့မျးက သီးသနျ့ဖှဲ့ထားသော အခနျးလေးထဲဝငျကာ မီးဖှငျ့လိုကျသညျ။ ဆေးခနျးအတှကျ သီးသနျ့ဖှဲ့ထားသော အခနျးလေးထဲက လေးပမေီးခြောငျးလေး လငျးသှားသညျ။ မီးလငျးသှားမှ နံရံတှငျကပျထားသော ဒေါကျတာဇှဲသဈ ဆိုသော ဆိုငျးဘုတျအပွာလေးကိုတှလေို့ကျသညျ။
“ထိုငျပါ ညီမ ဘယျလိုဖွဈတာလဲ”
ဒေါကျတာဇှဲသဈက ဟနျနီ့လကျနှဈဖကျကို ဆှဲကွညျ့ရငျး
“အယျလျကိုဟော အလာဂြီမှနျးသိတယျဆိုတော့ အရငျကတညျးက ဖွဈဖူးတယျပေါ့ ဟုတျလား ?? ဒါနဲ့မြား ဘာလို့မြား ထပျသောကျတာလဲဗြာ ဒီလောကျခံရခကျတာကို”
“သိရဲ့သားနဲ့တော့ သောကျမလားရှငျ… သူငယျခငျြးက ယူလာပေးတာကို မတျောတဆ သောကျလိုကျမိတာ”
ဟနျနီက မကျြစောငျးထိုးရငျး ဘုဆတျဆတျ ပွနျပွောလိုကျသညျ။ ဒီလောကျ ခံရဆိုးတဲ့ ဝဒေနာကို မညျသူက မတညျ့မှနျး သိလကျြနှငျ့ သောကျနမေညျနညျး!! ဟနျနီ့ပုံကိုကွညျ့ကာ သူက ပွုံးလိုကျရငျး…
“ပမာဏတော့ နညျးတဲ့ပုံပါပဲ… လကျမှာ ဖွဈတာဆိုတော့”
“အငျး အဲဒါ ကံကောငျးသှားတယျ.. ကဲ လိမျးဆေးပဲ ပေးလိုကျမယျ ပှတျမလိမျးနဲ့ ဖှဖှလေးလိမျးပေးနျော”
ဟနျနီက ခေါငျးညိတျလိုကျစဉျ ယမုံက ဝငျပွောသညျ။
“မနကျဖွနျတော့ ပြောကျမှာပါနျော ဒေါကျတာ”
“မနကျဖွနျတော့ အလုပျခှငျ့ယူလိုကျရငျ ပိုကောငျးမှာပါ… အိမျမှာပဲ သကျတောငျ့သကျသာ နားစခေငျြတယျ ဘာအလုပျ လုပျသလဲ”
ထိုမေးခှနျးကို မေးလိုကျသောကွောငျ့ ဟနျနီသူ့ကို ဖတျြခနဲကွညျ့လိုကျမိသညျ။ ဟနျနီသညျ လြှမျးလြှမျးတောကျ အောငျမွငျနတောမြိုး မဟုတျသေးသျောလညျး ကွျောငွာ မဂ်ဂဇငျးတှမှော မကွာခဏ ပါနသေူဖွဈသညျ။ သူသိလကျြနဲ့ တမငျမြား မေးနလေားဟု အကဲခတျသျောလညျး သူ့မကျြနှာကပုံမှနျပငျ။
ဟနျနီက မဖွသေောကွောငျ့ ယမုံကပဲ ဝငျဖွသေညျ။
“သွျော… ဒါဆိုလညျး ရှုတငျတဈရကျလောကျတော့နားလိုကျပါ။ မိတျကပျတှဘောတှေ လိမျးရငျ ပိုဆိုးမှာ… ကဲ ဆေးမှတျတမျးလေးယူရအောငျ နာမညျက…”
Related Article >>> သဈခကျလေးရဲ့ကောငျးကငျပွာ
ဆေးခနျးထဲကထှကျလာတော့ အလငျးရောငျ အနညျးငယျ မွငျနရေပွီဖွဈ၍ တိုကျခနျးရှကေ့ “ဇှဲ ဆေးကုခနျး” ဆိုသော ဆိုငျးဘုတျကို မွငျလိုကျရသညျ။ ဝလေီဝလေငျးမှာ ဆေးထကုပေးတာ အားနာစရာ ကြေးဇူးတငျစရာပမေဲ့ ဟနျနီ ကတော့ သိပျမကနြေပျခငျြ။ လူကိုဆရာကွီးလုပျတာရော ဟနျနီ့ကို သိတောငျသိပုံမပျေါတာရောကို မကနြေပျ။
“ဟဲ့ ဟနျနီ မကျြနှာကလညျး စူပုပျလို့ ဘာဖွဈနတောလဲ”
“ဟိုလူပေါ့.. ငါ့ကို သိတောငျမသိဘူး”
“ဒေါကျတာကိုပွောတာလား… သူက တီဗီမကွညျ့လို့နမှောပေါ့ဟာ”
“ဘာပဲဖွဈဖွဈဟာ မျောဒယျလျလို့ပွောတာတောငျ နညျးနညျးမှအံ့သွပုံမပွဘူး ဘယျလိုလူလဲမသိဘူး… ကွောငျတောငျတောငျ ယိုတိယိုရှဲနဲ့… ဆရာကလညျးလုပျသေးတယျ”
“အေး အဲ့ဒီကွောငျတောငျတောငျနဲ့ လူကပဲ မနကျ ၃ နာရီခှဲကွီး နငျ့ကို ဆေးထကုပေးတာ မဟုတျဘူးလား”
“ဟုတျပါတယျ အဲ့ဒါကွောငျ့လညျး ဘာမှမပွောဘဲ သညျးခံနတော”
“အမလေး ဟနျနီရယျ မဟုတျတာကို ကောကျခငျြနပွေနျပွီ ကဲ ဒီနတေ့ော့ အိမျမှာနားလိုကျ ဒီနကေ့ ဓာတျပုံရှုတငျပဲ ရှိတာမို့လို့ တျောသေးတယျ နောကျဆို အစားအသောကျ အနအေထိုငျ ဆငျခွငျ ကွားလား… နောကျတဈပတျလညျး အခြိနျတှကေ အပွညျ့နျော နောကျလဆိုရငျ ဇာတျလမျးစရိုကျတော့မှာ”
“အခု အလာဂြီက ဧကသုလကျခကျြ မဟုတျလား”
“သူကတမငျလုပျတာမဟုတျပါဘူးဟ မသိလို့ယူလာပေးတာ ငါလညျး မသိလို့ သောကျလိုကျတာ”
“အငျး အခုကတညျးက ကာပွောနတေယျ မိနျးမနျော အခြိုးတှပွေောငျးနပွေီ”
ယမုံပွောတာကို ဟနျနီကဘာမှပွနျမပွောဘဲ ရယျသာရယျနလေိုကျသညျ။ အိမျရောကျတော့ မမေကေ ဟနျနီ့ ကို ဆေးလိမျးပေးပွီးနောကျ ဟနျနီလညျး အိပျရာထဲပွနျဝငျကာ ခှနေလေိုကျသညျ။ အတှေးထဲတှငျ စိုးမိုးလာသော ဧကသု ၏ အပွုံးခြိုခြိုလေးမြားက ဒေါကျတာဇှဲသဈကွောငျ့ ဖွဈခဲ့ရသော ဒေါသတှကေို လှမျးမိုးကာ ပတျဝနျးကငျြတဈခုလုံး ခြိုမွလာသလိုပငျ..
ကျောဖီပူပူတဈခှကျကို အရသာခံသောကျရငျး မနကျခငျးနထှေကျလာသညျကို ကွညျ့ရသညျ့ ခံစားခကျြကို ဧကသု အကွိုကျဆုံးဖွဈသညျ။ မှနျရှတှေ့ငျ ကာထားသော လိုကျကာရှညျနှဈစကို ဆှဲပွီး ဘေးကပျပဈလိုကျသညျ။ ရနျကုနျမွို့၏ မနကျ ၄ နာရီခှဲအခြိနျသညျ အနညျးငယျ အေးခမျြးနသေညျဟု ထငျရသညျ။ မကွာမီအခြိနျတှငျ ကားမြား လူမြား ဖွငျ့ လမျးမမြားပျေါတှငျ ပွညျ့နှကျလာတော့မညျ။ ကှနျဒို ၁၀ ထပျမွောကျမှ လှမျးမွငျရသောကောငျးကငျသညျ တိမျလှာမြား အုပျဆိုငျးကာ ထူထူထဲထဲရှိလှသညျ။ နမေငျးမှဖွာထှကျသော လိမ်မျောရောငျအလငျးတနျးမြားကလညျး တိမျစိုငျမြားကွားမှ ထိုးဖောကျယိုစီးလကျြရှိသညျ။
ဧက ကျောဖီခှကျကိုကိုငျရငျး မှနျနှငျ့မကျြနှာခငျြးဆိုငျခထြားသော ဆိုဖာခုံပျေါထိုငျခလြိုကျသညျ။ နံရံကပျဘီရိုပျေါတငျ ထားသော အမှေးရညျဖွနျးစကျကလေးမှ အငှဖှေ့ားလေးမြားထှကျလာကာ လာဗငျဒါရနံ့မြား သငျးပြံ့လာတော့သညျ။ နှာသီးဝ သို့ တိုးဝှလေ့ာသော လာဗငျဒါရနံ့ကို ရတော့မှ ညက တှခေဲ့ရသော ခရမျးနုရောငျမိနျးကလေးကို သတိရမိသညျ။ ဟနျနီမေ… ခရမျးရောငျလေးဝတျထားတော့ လာဗငျဒါပနျးလေးနှငျ့တောငျ တူသလိုလိုပငျ။
ဧက မိနျးကလေးအမြားကွီးနှငျ့ တှဖေူ့းသညျ။ ခဏတာ ခငျမငျဖူးသညျ။ သို့သျော တဈယောကျကိုမှ ဟနျနီမေ ကဲ့သို့ စိတျထဲစှဲစှဲထငျထငျ မရှိလှ။ ဧကသုက ကြျောကွားသညျ။ လူအမြားစုက သူ့ကြျောကွားမှုကွောငျ့သာ သူ့ကို ခငျမငျရငျးနှီးလို ကွသညျ။ ထို့ကွောငျ့ သူ့တှငျမိတျဆှအေစဈတော့ တျောတျောရှားသညျ။ အနုပညာလောကတှငျးမှ မောငျနှမလို ခငျမငျရသူ အခြို့နှငျ့ ကြောငျးကတညျးက ခငျခဲ့သညျ့ သူငယျခငျြးအခြို့လောကျသာ သူ့အတှကျ အစဈအမှနျဖွဈသညျ။ မိနျးကလေးမြားနှငျ့ ပတျသကျလာလြှငျလညျး ထိုနညျးအတိုငျးပငျ။ အောငျမွငျလိုသော တကျသဈစကလေးမြားက သူ့ကိုကပျသညျ။ ပိုကျဆံရှိ အသိုငျးအဝိုငျးကွီးကွီးက မိနျးကလေးမြားက သူ့ကိုကပျသညျ။ သို့သျော အတုအယောငျမြားပငျ။ ထို့ကွောငျ့ ဧကဘေးတှငျ မိနျးကလေးမြား ဝိုငျးနသေျောလညျး ဧက နှလုံးသားကိုတော့ မညျသူကမှ ကိုငျမလှုပျနိုငျသေး။
ဟနျနီမကေို တှဖေူ့းသျောလညျး တကယျတမျး စကားပွောဖူးပွီးမှ စိတျဝငျစားမိလာသညျမို့ ကိုယျကိုယျတိုငျပငျ အံ့သွရသညျ။ ညက သူပေးလိုကျသညျ့ ဝိုငျတဈခှကျကွောငျ့ အလာဂြီမြား ထနသေေးလားလို့ စိတျထဲထငျ့သှားသညျ။ ဖုနျးဆကျမေးရအောငျလညျး ဖုနျးနံပါတျက မသိ။ ဖစျေ့ဘုတျတှငျလညျး သူငယျခငျြးမဟုတျ။ ဒီထကျပိုဆိုးသညျက သူ့ဘကျက တမငျတကာ လိုကျရောနသေညျဟု အထငျခံရမှာကိုလညျး ကွောကျရသေးသညျ မဟုတျပါလား။ ထို့ကွောငျ့ ဒီမနကျတော့ တဖွညျးဖွညျးခငျြးထှကျ လာသညျ့နမေငျးကို အရသာမခံနိုငျဘဲ စိတျမသကျမသာဖွငျ့သာ ထိုငျကွညျ့နမေိတော့သညျ။
Tags: Dark, Domestic, fiction, Fun, Possessive, psychology, violence